को वार्षिकोत्सव मा परी कथा। एक वार्षिकोत्सव लागि Reworked दन्तिये। वार्षिकोत्सव मा कहानिहरु improvisations
एक परी कथा आफ्नो लिपि समावेश हुनेछ भने कुनै पनि छुट्टी एक लाख पटक थप रोचक हुनेछ। को वार्षिकोत्सव मा, यो पहिले नै पूर्व-तयार फारम पेश गर्न सकिन्छ। अक्सर शो समयमा प्रतियोगिताहरु - तिनीहरूले औपचारिक प्लट मा शामिल गर्नुपर्छ। तर कथा को वार्षिकोत्सव मा उपयुक्त छ, कफ बन्द बाहिर प्ले।
अभिनेता नयाँ तरिकामा "साहसी गूंज फ्लाई"
अतिथि अक्सर एक वार्षिकोत्सव लागि हास्यास्पद कथा हो। महिला उपयुक्त reworked उत्पादन Korney Chukovsky, प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि सबै ज्ञात छ जो। साथीहरू, र दर्शक देखि एक साँचो चासो र संक्रामक हास्य कारण फरक दृष्टिकोण मा पेश कथा, संग पनि एक सानो नरमाइलो लाग्यो। र "साहसी गूंज फ्लाई" - यो ठीक अपवाद बिना सबै अपील गर्नेछ जो वार्षिकोत्सव, मा कथा छ।
को परी कथा मा, यहाँ प्रस्तावित को हेरफेर निम्न वर्ण समावेश:
निडर भई गूंज फ्लाई, सबै पक्षहरूमा मा राजी, मिलनसार र सत्कार गर्ने महिला।
हजुरआमा मौरी, आफूलाई अरू सबैलाई भन्दा चलाख ठान्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति।
Dragonfly, स्लिम सुरुचिपूर्ण सौन्दर्य, गर्व र सबै मानिसहरू सपना जो unapproachable, तर पनि उनको कुरा गर्न डराउँछन्।
किरा, एक आकर्षक जवान, चुपके स्थानीय बाढी को सेक्स प्रतीक बुझे।
फ्लिया № 1 schoolmate झिंगा।
फ्लिया № 2, सह-कार्यकर्ता।
फ्लिया 3, को stairwell मा छिमेकीको №।
लामखुट्टे-नायक कुरूप सानो, एक गहिरो भित्री शान्ति मानिस एक अति राम्रो-पढ्न र भद्र जवान देखिन्छ।
स्पाइडर, हानिकारक र दुष्ट कानुनी अधिकारी।
महिला को वार्षिकोत्सव मा एक परी कथा थप हास्यास्पद प्रस्तुत पाउँदा, तपाईं सिद्धान्त मा कलाकार चयन गर्नुपर्छ: "यसलाई र अधिक उपयुक्त छ - राम्रो।" कि मानिसको भूमिका एक महिला र विपरित अनुरूप हुनेछ, छ। र मुख्य चरित्र, सबै पक्षहरूमा मा एक सुखद महिला, एक मानिस प्ले हुनेछ भने, एक्लै यो अवधारणा दर्शक अनुकूल हास्य कारण हुनेछ।
महिला को वार्षिकोत्सव मा हास्यास्पद Tales की, यो लघु को रेखाचित्र लागि तयारी यस भाग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। को चरणबद्ध आधा को सफलता अक्षरहरू रचनात्मक हेर्न कसरी निर्भर गर्दछ। तसर्थ, क्रममा स्त्रीको वार्षिकोत्सव मा एक परी कथा प्रदान गर्न हास्यास्पद र विनोदी थियो, यो सही वेशभूषा चयन गर्न आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि, Dragonfly। सबै प्ले एक आकर्षक stroynyashkoy बाक्लो मध्य-वृद्ध मस्यौदा वा पर्याप्त प्रमुख तिमी मानिस हो भनेर सहमत? यो आवश्यक गहिरो neckline र विशाल गाढा चश्मा एक पोशाक हुनुपर्छ। हजुरआमा मौरी केटा सौंपन सर्वश्रेष्ठ छ, एक शाल उहाँलाई राख्यो लामो, व्यापक स्कर्ट उहाँलाई राख्नु र बाक्लो फ्रेम आफ्नो चश्मा मा fastened।
ठूलो हेरविचार निर्माण गर्न नजिक हुनुपर्छ माकुरा पोशाक। यसलाई पुरानो लुगा र पन्जा केही जोडी देखि आस्तीन आवश्यक थियो। सम्पूर्ण संरचना एक कृत्रिम गद्दी भर्न आवश्यक हुनेछ, फोम वा कपास को टुक्रा, को आस्तीन, पंजे पंजे, तार cages सम्मिलित गर्न सकिन्छ।
"साहसी गूंज फ्लाई" - मुख्य पात्र को उत्पादन
पुन अभिनयमा मास्टर शब्दहरू सुरु:
वार्षिकोत्सव लागि हास्यास्पद Tales
टाढा पकाएको - हेर, लजालु हुन छैन!
अब हामी कलाकार भन्नेछु
फ्लाई र स्केच कार्यक्रमको बारेमा।
यो फ्लाई यति
(यो पुरानो महिलाको)
एक पटक सडक थियो।
आफ्नो खुट्टा मा देख,
Belle मुद्रा फेला परेन।
लामो समय को लागि सोच बिना
ऋण बारेमा भूल -
बोक्न, म फेला, र पठाउनुहोस्।
र बस निर्णय,
प्रयोग भएको थियो कि Chudnenko
यो कल गर्न आफ्नो पाहुनाहरूलाई प्रदान गर्दछ।
आज यो वार्षिकोत्सव मा सांगीतिक दन्तिये, मजा खेल्न सुशील भयो भएकोले उत्पादन त्यो patty कसरी फेला बारेमा साहसी गूंज उपयुक्त बिट ध्वनि Verka Serduchka झिंगा। यो हेरोइन को धुन मा एक सानो नृत्य छ।
फ्लिया beetles आउटपुटहरू
महिला को वार्षिकोत्सव मा एक दृश्य-कथा देखाउन जारी, र एक अक्षर आउन द्वारा एक प्ले चरण बहाना।
पहिलो फ्लिया आए -
फ्लाई साबुन ल्याए।
हँसिलो कान बाट कान, ठूलो स्वरमा उड:
- आउनुहोस् तपाईं धर्म पिता हुन्!
(फुसफुसा) त्यो परमेश्वरले उनको पागल दिनुभयो होइन!
जो साबुन दिन्छ?
ठूलो स्वरले जारी:
- के तपाईं सौन्दर्य हो!
म आफ्नो पोशाक मन !!!
फ्लिया नम्बर दुई, आए
फ्लाई केक ल्याए।
उड - ठूलो स्वरमा, रूपमा charmingly अझै पनि हँसिलो:
- आउनुहोस्, चाँडै तल बस्न,
म वास्तवमा वार्षिकोत्सव मा छ!
Echidna तर्फ लेकानेखुसीगर्छ:
- केक, किन ल्याए?
तपाईंलाई थाहा, म यो खान छैन!
सबै त्यो skhomyachit ...
भगन, एक बल जस्तै पेट!
ठूलो स्वरमा र नरमररुपले:
- ओह, के जूता
आधुनिक Fleas मा!
यहाँ र fleas वा तीन आउन -
निडर भई गूंज फ्लाई (ठूलो स्वरमा बोले र sweetly मुस्कान):
- नमस्कार, प्रिय छिमेकी!
तपाईं चकलेट जस्तै सुन्दर!
(Angrily तर्फ whispered):
- यहाँ priperlas खान केहि
निःशुल्क ... (ठूलो स्वरमा) तपाईं तल बस्न सक्छ
साना सञ्झ्यालमा। उड्ने छैन?
(फुसफुसा) म चाहन्छु टाढा Blown हुन गर्न -
भगन किनभने धेरै बढेको छ
बोसो को किलोग्राम - शक्ति!
दृश्य मथ प्रवेश
अक्सर contested Tales, मान्छे बन्द गर्न र बच्चाहरु छैन, जाँदैछन् जहाँ वार्षिकोत्सव, मा मजा केहि अस्पष्ट हुन सक्छ। यहाँ फेरि यो नेता, "स्थानीय बाढी को एक आकर्षक जवान, चुपके पहिचान सेक्स प्रतीक" अनुसार, दृश्य मथ देखिन्छ। तर, यो एक जवान केटी देखाउँछ - यो पनि विडंबना निहित। र आज मान्छे झन् एक वार्षिकोत्सव लागि सांगीतिक परी कथा रुचि भएकोले उपयुक्त किरा उत्पादन गीत साथ दिनु गर्न। निस्सन्देह, यो मा शब्द नयाँ छन्, तर माधुर्य प्रसिद्ध हिट बाहिर लिन राम्रो छ। यस्तो उदाहरणका लागि, एउटा गीत, हुन सक्छ "हे परमेश्वर, मानिस के!"
किरा फूल र गायन को एक विशाल फूलगुच्छा वहन:
- हे ईश्वर, एक फ्लाई के!
म छोरी कसरी चाहनुहुन्छ
र मह अनाज बैरल।
म पनि एउटा नयाँ "दया कोर" चाहनुहुन्छ -
तिमी - आकर्षण, तिमी - आरु!
किरा एक गोडा मा जन्मदिन केटी अघि पतन र उनको फूलगुच्छा धारण। "बगैंचामा लामो पहिले chrysanthemums फिक्का" को ट्युन गर्न एक गीतको स्वर मा संकोच उड र उहाँलाई जवाफ:
- अरे, मेरो नाइट, चरवाहे,
म मेरो हृदय दिन ...
तपाईं मेरो सपना, मेरो नायक हो!
आवेग सबै बाल्न !!!
उपज Dragonfly र हजुरआमा मौरीले
त्यसपछि त्यहाँ (मास्टर पाठ) "सबै मानिसहरू सपना, तर पनि बोल्न डराउँछन् जो स्लिम सुरुचिपूर्ण सौन्दर्य, गर्व र unapproachable," छ। वास्तविकता मा, Dragonfly सबै सम्भव यदि अनुरूप को संकेत बिना, एक परिपक्व मानिस लिन्छ। यसको उत्पादन, गीत सँगसँगै छ को धुन reworking को सर्वनाम "तपाईंको" "मेरो" संग बदलिएको छ जसमा "म बालुवा चुम्बन गर्न तयार छु।" यो दुःखी छ र पनि एक रुमाल संग उनको आँसु पोंछे।
किरा याद आफ्नो आकर्षण लागि नयाँ लक्ष्य, दुवै आँखा तुलना झिंगा को एक उत्साही गुच्छा पकड लिन्छ र Dragonfly गर्न हतारमा। आफ्नो गीत पनि उनको लागि दोहोर्याइएको छ।
म एक मानिस हुँ बर्बाद छैन ...
म कार देखि चाहनुहुन्छ!
एक एक पांग्रे ठेलागाडी जस्तै काट,
अपार्टमेन्ट र dacha!
Omniscient हजुरआमा मौरी अन्य एक हातमा nedovyazannym मोजा र दूरबीन संग चरण मा जान्छ। नाटकहरु ट्रयाक "हजुरआमा-पुराना महिलाहरु।" त्यो राम्ररी माथिबाट तल प्रत्येक दूरबीन विचार, को किरा र महिलाहरु आफ्नो धेरै नजिक नजिक। त्यसपछि फोन लिन्छ, चित्र फ्लाई लिन र एक नम्बर डायल।
स्पाइडर र लामखुट्टे बीच लडाइँ
स्पाइडर ठूलो स्वरमा को धुन "हाम्रो कार्यालय र खतरनाक र कठिन" एउटा गीत गाइरहेका, दृश्य प्रवेश गर्छ।
Bailiffs सेवा खतरनाक र कठिन छ,
तर सबै पनि चाँडै यो देखिने छ।
कसैले हाम्रो समयमा कतै भने
केही भुक्तानी गर्दैन,
हामी एक हात संग घाँटी द्वारा उहाँलाई लगे,
पहिले नै हामी दोस्रो हात आफ्नो खल्ती Sharim मा,
गरौं उहाँले yells: "पर्याप्त!"
माकुरा, देख्नुहुन्छ फोन लिन्छ र एक फोटो, एक सन्तुष्ट nods यसलाई तुलना र उड जान्छ उड। हजुरआमा मौरी खुसी, आफ्नो हात claps spiders हटाइएको धनुष।
- महोदया, एक अफवाह पुग्नुभएको छ ...
तपाईं एक peccadillo छ!
सन्देश यहाँ छ: "फ्लाई,
कि पैसा को एक नागरिक फेला छ।
आफ्नो कल आगन्तुकहरूलाई "भ्रमण गर्न।
खैर, यो थियो?
- एक्लै छोड!
मलाई एक्लै छोड्न, म तपाईं परमेश्वरको माग्छु!
- हो, म खुसी हुन चाहन्छु,
बस तपाईं धन भुक्तानी गर्न हाम्रो खजाना आवश्यक छ किनभने!
तालिका मा स्पाइडर पर्याप्त खाना, तपाईंको झोला मा टक कि आफ्नो पक्षमा मा लटकी। त्यहाँ पनि त तिनीहरूलाई गुना, आफ्नो कुर्सियों देखि beetles धक्का, र पनि टाढा तिनीहरूलाई लिन प्रयास गरिएको छ, छल्ले र Dragonflies को हात बाट लिएको कंगन, उपहार अतिथि pokes। तर यहाँ लामखुट्टे आउँछ। त्यसपछि तपाईं Chukovsky गरेर कथा मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
"सौन्दर्य सो" - अभिनेता
अक्सर, एक ठूलो सफलता Tales reworked छन्। जसको परिवार हालै कम्प्युटर र इन्टरनेट, उत्कृष्ट उपयुक्त "सो सौन्दर्य" लिए एक युवा विवाहित मानिस, को वार्षिकोत्सव मा। Pushkin को षड्यन्त्र शैली राखे गर्न सकिन्छ। धेरै नै कथा, प्रस्तुत मानिसको वार्षिकोत्सव मा राम्रो यसको आफ्नै अद्वितीय ढाँचा मा विकसित हुन सक्छ।
पाठ अग्रणी र कलाकारहरूको तिनीहरूलाई नियुक्त यस्तो लेखिएको, वा अतिथि स्वयम्सेवकको प्लट को पाठ्यक्रम तिनीहरूलाई उपलब्ध छन् कि कार्यहरू। बाहिर हास्यास्पद यो दृश्य-कथा, पाहुनाहरूको बाहिर प्ले को वार्षिकोत्सव मा, यो क्रम-सुन्दर पत्नी मा भूमिकाको वितरण गर्न सिफारिस गरिएको छ (पुरुष, वृद्ध), पति-यात्रा (जवान केटी), छिमेकी (जवान), कम्प्युटर (महिलाहरु वृद्ध)।
को improvisation अघि प्रिपेरेटरी चरण
आज एक वार्षिकोत्सव लागि प्ले reworked दन्तिये अक्सर। र यो अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ, रंगीन हेर्न बनाउन विशेषताहरू: झोला, छड र माछा मार्ने जूते "व्यापार यात्रा" को लागि; नाप्ने 60 एक्स 60 सेमी, जो यसको गन्तव्यमा लेखिएको छ आँसु लागि रुमाल; , आँखा को लागि slits संग बक्स मनिटर देखाउँदै यो किबोर्ड बाट कर्ड फिट हुनुपर्छ; को अभिलेखमा तीन-लीटर जार "को नुन लागि।"
"सो सौन्दर्य" - स्वरको आरोह अवरोह
कथा - झूट, यो सङ्केत त -
राम्रो पाठ fellows:
छोडेर - छोड्न,
तर, मेरो साथी, भूल छैन,
आफ्नो कल को सानो पत्नी,
ईमोटिकनहरू अक्सर हिंडे
र नि: शुल्क उपहार
को "स्कूलका साथीहरू" मा - unbranded
यसलाई पठाउन अब सम्भव छ,
म मतलब मेरो कर्तव्य प्रदर्शन गर्न।
को वार्षिकोत्सव मा परी कथा - पहिलो कार्य
लेखक पाठ होस्ट यस्तो लेखिएको छ: पति र पत्नी राम्रो-बिदाई,
को projectile को मिसन,
र एक supruzhnitsa
गाउँमा पर्खाइ। र कम्पनीहरु
सबै आँखा त बेवास्ता गरिन्छ -
यो मौन छ! खैर, यो के फरक छ?!
र म सुतेको मृत निद्रामा गिर ...
दायाँ त्यहाँ र त्यसपछि - कम्प्युटर मा।
गर्मी साँच्चै परिवर्तन सिरेटो -
कस पति सोता:
यो देख्न सकिन्छ यो भाइरस छ
त्यहाँ संक्रमित गरिएको छ।
Ineta उहाँले नजिकै
एक महिला र glared को शरीर
हृदयमा सही! छरछिमेकी
उनको नुन लागि ट्याप,
... म वरिपरि हेरे र बायाँ।
उहाँले इन्टरनेट अवहेलना,
किनभने म चाँडै भन्ने थाहा थिएन
उहाँले शोक धेरै प्राप्त
आफ्नो अज्ञानता मार्फत।
पति थियो ... "ई-मेरो!" -
उहाँले कराए। छिमेकी एकैचोटि
म सही मा punched - दायाँ आँखा मा!
उहाँले धेरै चिया डकगरिएको,
र त्यो कुर्सी मा गिर,
अनुकूल slain बैठक।
"सौन्दर्य सो" - ऐन द्वितीय
नेतृत्व पढेर जारी पाठ र को वार्षिकोत्सव मा, दृश्य-कथा प्रस्तुत, एक impromptu अतिथि प्ले।
पति पत्नी गर्न हतारिएको,
पनि चुम्बन। प्रयासहरू
सबै ल्याए छैन प्रयोग गर्दछ।
पत्नी सुतिरहेको। "ठीक छ, धेरै, सुत्न जाने कि," -
त्यसैले उहाँले भन्नुभयो। "खराब भाग्य ...
कसरी यहाँ हुन? "अनि देश पति
विचार लागि बन्द चलाए।
फेरि मूर्खता म प्रतिबद्ध!
"सौन्दर्य सो" - ऐन III
यो विडंबना अधिकतम संग एक वार्षिकोत्सव लागि प्ले-कथा impromptu आवश्यकता कि स्पष्ट हुनुपर्छ। तसर्थ, मानव गुण र बानी छ कि inanimate वस्तुहरु सामान्यतया कहानी मा मुख्य वर्ण हो। र कथा मानिस को वार्षिकोत्सव प्रस्तुत छ रूपमा, खेल एकदम उपयुक्त अभिनेता केही frivolity र sensuality हुनेछ छ।
एक जोडीलाई blissfully सुतिरहेको छ।
कम्प्युटर उनको अर्को। पक्कै,
निद्रामा मोडमा, यो थियो -
पति बन्द गर्न भूल
यो परिष्कृत एकाइ,
आफूलाई उहाँले खुसी थियो!
त्यसपछि यो घटना भयो -
पीसी अचानक अचानक चालू,
देख्यो र ... प्रेम!
म मात्र एक मूर्ख प्रयोग प्रेम पर्नु छैन
Comp हाम्रो एक simpleton थिएन रूपमा ...
Comp हाम्रो धेरै Tales थाह थियो
म zaek कसरी नम्र गर्न थाह
Blatant चापलुसी बहकाउने,
र के - र निन्दा।
र, एक मिनेट गुमाउने बिना
महिला लेकानेखुसीगर्छ: "मेरो Zaya!
तपाईं म पागल जाँदै छु! "
यो महिला माथि जगाए र त थियो,
उहाँले बिस्तारै वरिपरि हेरे
र म, "ठीक छ, भन्नुभयो
भन्न अनावश्यक, मालिक!
कसैले मलाई कल छ बेबी,
खैर, म बसिरहेका थिए भन्ने कुरा छ
हो दुवै पक्षले हेर्न?
मेरो श्रीमान् त srodu भन्न गर्दैन -
म आफ्नो नस्ल थाहा!
र केहि गर्न छिमेकी -
नुन उहाँलाई गर्नुपर्छ। "
मनिटर अचानक देख्यो -
के थियो अंदाजा!
"ठीक छ, मेरो कम्प्युटर, भन्न,
decomposable को समतल मा सबै!
मेरो श्रीमान् कहाँ छ, मलाई भन, म, अलमलिएको
जहाँ उनले सानो पत्नी देखि लुकाउने छ? "
उनको कम्प्युटर जवाफ दिनुभयो:
जहाँ यो छैन "त्यहाँ उहाँले थियो
अब, र अब देशमा! "
"हो, मेरो मित्र, कि खराब भाग्य हो।
उहाँले तपाईं नजिक हुनुहुन्छ, टाढा छ -
मलाई, म नजिक बस्न छौँ गरौं! "
चौथो, अन्तिम को कार्य - "सौन्दर्य सो"
को वार्षिकोत्सव मा एक impromptu दन्तिये, मजा प्ले, अभिनेताहरु तपाईं सारा कम्पनी मज्जा गर्न अनुहार अभिव्यक्ति र इशाराहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, किनभने हास्य को उत्कृष्ट अर्थमा हुनुपर्छ। किनभने यो बिन्दु मा, facilitator कलाकार कम्प्युटर र प्रेमलीला जोडी को तस्वीर देखाउन अनुमति दिने, एउटा सानो पज गर्नु पर्छ। यो दृश्य अभिनेताहरु को उपस्थिति मा supersmeshnoy गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा नै एकदम व्यंग्यात्मक अवस्था, को absurdity हास्य को एक राम्रो अर्थमा छ।
प्राण गायन को पत्नी।
तर ... ढोका नरमररुपले creaked,
र उनको पति यहाँ भयो! प्रत्येक गरौं
एक दिन सम्झना अचानक सबै
शायद सबै हुन -
महिला प्रेम पर्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
छिमेकीको - यो आफ्नो शत्रु सधैं छैन
र कहिले काँही - इन्टरनेटमा!
हामी उहाँलाई चाहना:
म एक जोडी को लागि मेरी श्रीमती बस्छन्,
हुँदा धेरै वर्ष को लागि स्वस्थ,
छैन इन्टरनेट हस्तक्षेप गर्न
तिनीहरूको मित्रता, प्रेम, संचार ...
ओह, माफ गर्नुहोस्, सन्देश
म "को साबुन मा" यहाँ पठाइयो!
अलविदा! (यहाँ अग्रणी अभिनेता बुझाउँछ) सरल?
को fatherland दिन को रक्षक
सबैभन्दा मूल जन्मदिन कार्ड केटा
जवान मानिसहरू लागि जन्मदिन पार्टी मा सक्रिय प्रतियोगिताहरूमा
प्रकाश को स्थापना: निर्देशन र जमीन नियम
यो संसारको पहिलो मोबाइल फोन छ
जेट पानी र जमीनमा बस्ने जनावर - कल्पना को कगार मा समीक्षा
Ivanov इगोर Vladimirovich: जीवनी र काम